Tena nisy teo alohany ve ny cosmonaut voalohany Yuri Gagarin? Hifantoka amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo be herim-po nanolotra ny ainy ho an'ny fandrosoana ity lahatsoratra ity.
Mpanamory sambondanitra "Zero". Iza avy ireo, ary tena izy ireo ve?
Tamin'ny 2007, amateurs radio Italiana roa no namoaka angon-drakitra momba ny famantarana efa nosakanany tamin'ny fiandohan'ny cosmonautika sovietika tamin'ny alàlan'ny onjam-peo vonjimaika.
Mahagaga, eo amin'ny fanelingelenana amin'ny radio ireo rakipeo, voalaza fa tsy ny fitempon'ny fon'ny alika sovietika voalohany no naheno ho eny amin'ny habakabaka ianao, fa koa ny feon'olombelona miantso vonjy.
Saingy avy eo hita fa teo amin'ny habakabaka ireo olona ireo talohan'izay. Yuri Gagarin? Tena nisy teo alohany ny Cosmonaut No. 1?
Tsy isalasalana fa ny laharam-pahamehana amin'ny sehatry ny astronautika dia ho mariky ny fahamboniana USSR eo amin'ny sehatry ny politika eran'izao tontolo izao, ary tsy ny rehetra no tia an'io.
Fotoana fohy taorian'izay, tamin'ny 1959, ny Italiana marani-tsaina dia nahazo ny famantarana mazava voalohany avy amin'ny fitaovana sovietika "Sputnik-1", Ny rafi-panjakana sasany dia liana tamin'ny hetsik'izy ireo ary nanohana ny" fikarohana "nataony ho takalon'ny fampahalalana momba ny asa rehetra mitranga any amin'ny habakabaka USSR.
Tsy ela dia nisy ny vokany: efa tamin'ny volana desambra 1959, ny masoivohom-baovao Italiana Continental dia nampandre ny besinimaro fa tamin'ny 1957-1959 tao amin'ny Firaisana Sovietika dia fanandramana miafina tsy misy maha-olona no notanterahina mba handefasana balafomanga balaonina eny amin'ny habakabaka, andrasan'ny olona velona.
Tamin'ny fanambarana nataony, ny masoivoho kaontinantaly dia niresaka tamin'ny mpitarika kominista Czech iray izay nilaza fa manodidina ny 11 cosmonauts no novonoina rehefa natomboka ny balafomanga sovietika.
Gazety tandrefana; avy hatrany dia naka ny vatam-pamantarana ny fandaharana habakabaka sovietika, nanampy ny lisitry ny mpanandrana maty vaovao rehetra: anarana: Dedovsky, Shaborin, Milkov, Ilyushin, Bondarenko, Zavadovsky, Mikhailov, Kostiv, Tsvetov, Nefedov, Kiryushin ...
Mandritra izany fotoana izany dia vitsy ny olona mahalala fa ny antsasak'ireo mpanamory fiaramanidina ireo dia velona taorian'ny nandosiran'i Gagarin, ary ny antsasany kosa tsy nisy velively.
Ary maninona no tena azo antoka fa an'ny "velona" ireo "feo" amin'ny kasety Italiana? Ny zava-misy dia ny sasany amin'ireo balafomanga balista dia nanana ... mpandeha. Saingy ny andraikitr'izy ireo dia nilalao mannequins mahazatra, izay nantsoina vazivazy hoe "Ivan Ivanovich" noho ny fitovian'izy ireo amin'ny olombelona.
Mazava ho azy, inona no azonao eritreretina rehefa mahita ny tafika mangina mamoaka "vatana tsy misy aina" amin'ny sambo fitobiana ianao, mampakatra azy ireo amin'ny angidimby ary mitondra azy ireo nefa tsy manazava na dia teny iray aza amin'ny solontenan'ny haino aman-jery? Ary ny sasany amin'ireo "Ivanoviches" aza dia nisy mpamatsy horonam-peo noraketina. Angamba ny «fitalahoany vonjy» no tsikaritry ny Italiana liana?
Amin'ny fetran'ny fahaizan'ny olombelona
Ary na izany aza tsy azo ambara tanteraka fa ny cosmonaut sovietika voalohany dia tsy nisy teo alohany. Mba hahazoana satro-boninahitra fahombiazana ny sidina fampisehoana Gagarin, ilaina ny angona mazava momba ny fitolomana miandry olona eny amin'ny habakabaka.
Noho izany antony izany, tamin'ny volana Jona 1953, nifototra tamin'ny Ivotoerana Fikarohana momba ny fiaramanidina sy ny fitsaboana eny amin'ny habakabaka, dia ekipa miafina misy mpilatsaka an-tsitrapo 12 tena salama no natsangana, izay noheverina fa hizaha ny fahasarotana rehetra amin'ny sidina an-habakabaka amin'ny toe-piainan'ny laboratoara.
Amin'ny fomba ofisialy, "Detachment-O" dia tsy nisy velively, fa raha ny tena izy dia notendrena nomerao ireo mpanapa-kevitra ary nampitandrina izy ireo fa amin'ny mety ho vokatry ny andrana dia mety hisy ny karazana aretina mitaiza, kilemaina ary na dia ny fahafatesana aza.
Ny zavatra niaretin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo be herim-po ireo dia azo tsaraina amin'ny famaritana ireo fitsapana natao tao amin'ny institiota fikarohana. Ohatra, ny dokotera Alemanina Manovtsev, biolojista Andrei Bozhka ary injeniera Boris Ulybyshev dia tsy maintsy nandany herintaona tao amin'ny efitrano iray 12 metatra M. Heat nitokana tamin'ny tontolo ivelany. metatra miaraka amina mpankafy mihozongozona tsy tapaka, mba hahafahan'ny mpahay siansa mizaha toetra ny ekipa amin'ny fifanarahan-tsaina.
"Pseudo-cosmonauts" roa hafa, Viktor Ren sy Mikhail Novikov, dia nandany adiny 6 nandritra ny fotoana nanandramana nanala ireo habakabaka tamina kapsily noterena, ary avy eo nandany 72 ora nihantona tao amin'ny Ranomasina Mainty mba hahitana izay vola fanampiny nila velona ny astronaut taorian'ny fidinana vonjy maika tany an-dranomasina. Ary i Novikov be herim-po koa dia nandray anjara tamin'ny fanandramana hamaritana ny fetran'ny fiaretan'ny vatan'olombelona amin'ny -40 ° C.
Nandritra ny 40 ora no nitazomana ny tundra tao anaty akanjo fitondra fampiofanana sasany, dia nanampy ireo mpahay siansa ireo mpahay siansa hamolavola fitafiana miaro hafanana izay ahafahan'ny cosmonaut ho avy mahatantona ny fanala mandritra ny 72 ora. Izay no fotoana ilan'ny mpamonjy voina azy ireo na aiza na aiza eto ambonin'ny tany.
Raha ny filazan'ireo mpitsapa azy ireo ihany dia nihevitra izy ireo fa 35 taona ho fotoan-tsarotra ho an'ny tenany: ireo tafavoaka velona tamin'izany ary tsy nosoratana ho an'ny fahasalamana dia niaina tamin'ny fahanterana masaka, raha ny "dimy voasoratra" - Ogurtsov, Druzhinin, Greshkov, Nikolaev sy Kopan - tsy naharitra. Nivelatra ...
Understudy isa aotra
Araka ny fantatrao, Yuri Gagarin dia nanidina nanodidina ny Tany tamin'ny sambon-danitra Vostok-1. Saingy vitsy ny olona mahalala fa herintaona talohan'io "cosmonaut number zero" Sergei Nefedov, backup an'i Gagarin, dia nanandrana ny fitaovana miafina "Vostok-0" miasa - kopia marina an'ny sambo nandimby azy. Ny fitsapana rehetra ny rafi-pamelomana aina ihany no niseho tsy tamin'ny orbit fa tamin'ny toe-piainan'ny laboratoara.
Endri-javatra lehibe "Zero" cosmonaut Nefedov nisy ny fitoviana anthropometric feno nataony tamin'ny cosmonaut No. 1: ny haavony, ny lanjany ary ny fisehoany mihitsy. Ny lahasa lehibe indrindra ho an'ny mpianatra ambany dia ny miaina eto ambonin'ny tany imbetsaka mihoatra noho izay nandrasan'i Gagarin teny amin'ny habakabaka, ary nilaza ny "tany am-boalohany" momba ny fihetseham-pony. Ohatra, raha nandritra ny sidina Gagarin dia tsy maintsy nandany ora maro teo amin'ny toeran'ny "embryon", dia nandany iray volana i Nefedov tao, ary tsy naka tahaka ny tsy fahampian'ny lanjany.
Ny spacesuit an'ny Gagarin koa dia "voasokitra" avy amin'i Nefedov, izay tsy maintsy niaritra "fittings" lava avy amin'ny plastika, nijoro nandritra ny ora maro tamin'ny toerana tsy mahazo aina. Indray mandeha "cosmonaut number zero" dia niasa be loatra nandritra ny fanandramana iray hafa tamin'ny sakafo amin'ny toe-javatra faran'izay henjana ka nandany 4 ora teo amin'ny latabatra fandidiana izy: nandà tsy handevona sakafo fotsiny ny vavony ...
Na izany aza, nivadika ho mailaka ny nomaniny ho solon'izay, ary tamin'ny faran'ny taona 1961 dia niditra ho isan'ny mpitsapa ofisialy izy. Ankehitriny dia mihoatra ny 80 taona izy, saingy mbola falifaly ary mbola manonofinofy amin'ny habaka.
Ny sidina Gagarin ho any an-habakabaka: zava-misy tsy fantatra momba ny hetsika lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-20
Inona ny anaran'ny sambo Yuri Gagarin: dikan-teny hafa
Ohatrinona ny an'i Gagarin teo amin'ny habakabaka ary sa izy teo?
Toerana misy an'i Gagarin Yu. A.
Posted in fialam-boly sy fialamboly
Prev Kajy fananganana trano
Manaraka Momba ny strudels, tatena ary famenoana
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,680.